Bit By Bit - Unxulumano - 6.4.3 Justice
Yobulungisa imalunga ukuqinisekisa ukuba iingozi kunye neenzuzo zophando zabiwe.
I-Belmont Report igxeka ukuba umgaqo woBulungisa ubhekisela ekuhanjisweni kwemithwalo kunye neenzuzo zophando. Okokuthi, akufanele kube njalo ukuba elinye iqela eluntwini lithwala iindleko zophando ngelixa elinye iqela livuna izibonelelo zalo. Ngokomzekelo, ngekhulu leshumi elinesithoba kunye neyokuqala, imithwalo yokukhonza njengezifundo zophando kwizonyango zawela kakhulu kumahlwempuze, ngelixa iinzuzo zonyango oluphuculweyo lwaluqhutyelwa ngokuyinhloko kwizityebi.
Ngokwenza oko, umgaqo woBulungiswa wawuqale ukutolika ukuthetha ukuba abantu abasengozini kufuneka bakhuselwe kubaphandi. Ngamanye amazwi, abaphandi akufanele bavunyelwe ukuphanga ngenjongo yokungenazixhobo. Iprogram ephazamisayo ekudlulileyo, inani elikhulu leengxaki zokuziphatha ezichaphazelekayo zibandakanya abathathi-nxaxheba abasemngciphekweni, kubandakanywa nabemi abangafundanga nabangenakuhlanjululwa (Jones 1993) ; amabanjwa (Spitz 2005) ; abantwana, abakhubazekileyo ngengqondo (Robinson and Unruh 2008) ; kunye nezigulane (Arras 2008) ezidala kunye nezikhuhlane (Arras 2008) .
Kodwa-ke, ngo-1990, iimbono zoBulungisa zaqala ukuguquka ekukhuseleni ukufikelela (Mastroianni and Kahn 2001) . Ngokomzekelo, abavukeli-mbumbulu baxelele ukuba abantwana, abesifazana kunye namacandelo amancinci kufuneka abandakanywe ngokucacileyo kwiimvavanyo zeclini ukwenzela ukuba la maqela azuze ngolwazi olufunyenwe kulezi zilingo (Epstein 2009) .
Ukongeza kwimibandela malunga nokukhuselwa kunye nokufikelela, umgaqo woBulungisa udlalwa ngokuphindaphindiweyo ukuphakamisa imibuzo malunga nembuyekezo efanelekileyo kumalungu-nxaxheba aphantsi kwengxoxo enzulu kwimigaqo yezokwelapha (Dickert and Grady 2008) .
Ukusebenzisa umgaqo woBulungisa kwimibandela yethu emithathu unikezela enye indlela yokubajonga. Akukho nanye kwezifundo abaye bathatha inxaxheba ngokuhlawulwa ngemali. Enye iphakamisa imibuzo enzima kakhulu malunga nomgaqo woBulungisa. Nangona umgaqo woBuhlomulo ungabonisa ukuba kungabandakanyi abathathi-nxaxheba abavela kumazwe abanoonophelo boorhulumente, umgaqo woBulungisa ungabambana ngokuvumela aba bantu ukuba bathathe inxaxheba-kwaye bazuze kwiimilinganiselo ezichanekileyo ze-Intanethi. Icala leNqweno, iMicimbi, kunye nexesha liphakamisa imibuzo kuba elinye iqela labafundi lithwele imithwalo yophando kunye noluntu luphela luncedo. Ekugqibeleni, kwi-Impact emotion, abathathi-nxaxheba abathwala umthwalo wophando babesisampula esingahleliyo esivela kubemi abaninzi abanokufumana inzuzo kwiziphumo (oko kukuthi, abasebenzisi be-Facebook). Ngaloo ngqiqo, uyilo loMngcipheko lwengqondo luhambelana kakuhle nomgaqo woBulungisa.